Ukulindelwa okunyanisekileyo kuzisa ukoneliseka kwabaThengi | Martech Zone
Kule minyaka imbalwa idlulileyo ndisebenze kwindawo yoxinzelelo lwetekhnoloji yoxinzelelo oluphezulu. Imicimbi emibini esila ngokwenene kwisiqalo kukusilela kokulindelweyo okwenyani kwinkqubo yentengiso kunye nentengiso kunye nokuqhutywa kwezinto ezintsha ezifunekayo kumathemba. Ukudityaniswa kwezi ngozi zimbini kunokuyikhubaza inkampani yakho ukuba awuyilinganisi ekwenzeni inkqubela phambili abathengi esele bethembele kuwe.
Ukutyhala inqaku emva kwenqaku lokuleqa ithemba elizayo ngelixa ulindelo luphoswe kwisiseko sakho sabathengi ngumdlalo oyingozi. Ndiyibonile kwiinkampani ezininzi kwaye andikaze ndiyibone isebenza ukuze iqalise kwinqanaba elilandelayo.
Yindibaniselwano yolwaneliseko kunye nenqaku eliqhubekayo lokukhutshwa eliza kwakha ishishini lakho ngobulumko. Kuya kufuneka ususe ibar kumacala omabini ukuze uphumelele.
Nazi ezinye zeengcinga:
Ukuba unabasebenzi abancinci kwaye ukhula ngokukhawuleza, ukuchitha iiyure kunye neeyure ukubeka abathengi abanomsindo apho okulindelweyo kungasetwanga ngokuchanekileyo kuya kukucothisa, ukuba akuyi kukuyeka.
Ukuba amanqaku akho ayasilela, thengisa ukunyaniseka, umbono, ubunkokeli kunye nabasebenzi kwinkampani yakho. Abantu abakhulu banokwenza nantoni na ukuba yenzeke.
Musa ukuthembisa amanqaku ngaphambi kokuba ube nawo. Kulungile ukuthetha ngemva yakho, kodwa ukubonelela ngemihla eqinileyo yokuhanjiswa kwinkqubo yentengiso zizithembiso oza kubanjelwa kuzo.
Ukuba kukho ukuxhomekeka kwabaxumi, nxibelelana nabo ngokufanelekileyo kwaye uqinisekise ukuba abathengi bakho bayaziqonda iziphumo zokungahlangani noxanduva lwabo kwintengiso kunye nenkqubo yokuphunyezwa.
Shiya igumbi ngempazamo. Ukulibaziseka kuya kwenzeka, iimpazamo ziya kwenzeka, iibhugi ziya kuphakamisa iintloko zazo ezimbi. Qinisekisa ukuba amaxesha akho amaxesha avumela konke oku kungentla.
Musa ukuvumela abathengi bakho bachaze ishedyuli yakho, kungenjalo uthatha uxanduva xa ufike emva kwexesha. Kungcono ukuyenza kwaye uyenze ngokufanelekileyo kunokuba uyenze ngokukhawuleza okanye ngokungalunganga kwangoko.
Qeqesha abasebenzi bakho abathengisayo kwaye ubenze babenoxanduva lokulindela izinto ezingezizo. Sukuyifaka ingxaki kumgca wokuvelisa. Akulunganga ukuba omnye umntu azalisekise isithembiso esineempazamo.
Tama izinto zakho zokuthengisa. Kulungile ukwandisa isigama sakho sentengiso, kodwa ungathembisi iimveliso, amanqaku, ukukhutshwa, amaxesha amisiweyo, okanye inkonzo ongenakho ukuyizalisekisa.
Yazisa umxhasi ngokukhawuleza xa iprojekthi icwangcisiwe. Kubalulekile ukuba umthengi azi ubunyani bento eyenzekayo. Amaxesha amaninzi, abathengi bafumanisa kumhla obekiweyo ukuba abayi kuyenza. Njengomkhondo weedominoes, oku kungazitshabalalisa izicwangciso ezininzi ezantsi kwinkampani yakho engazaziyo.
tags: Krisimesiukuthengisa umcimbiIincwadi Zentengisoimisitho yentengisoIikhowudi zeQRU kufundazigqiboIinkqubo zomvuzoumvuzointengiso yethebhulethi
Imibuzo emi-4 yokuBuza iNdwendwe kwiWebhusayithi yakho
Sep 18, 2008 ngo-5:19 PM
Andikwazanga ukuvuma ngakumbi, Douglas. Isithuba sakho sixhaswa ngumsebenzi kaSzymanski noHenard abapapashe inqaku kwi-2001 efumene ukuba kwezinye iimeko ukulindela ukuba umthengi anakho kubaluleke kakhulu ekunqumeni ukwaneliseka kwabo kunokuba ukusebenza!